﻿Download IPhekhi yeIntafeyisi yoLwimi ye-Windows 7 from Official Microsoft Download Center
HausaI-DariIgboInuktitut (Latini)Isi-AfrikansiIsi-AlbhaniyaIsi-AmharikhiIsi-ArmeniyaIsi-AssameseIsiAyisilendaIsi-Azeri (Latini)IsiBaskhaIsiBengali (Indiya)IsiBhengali (Bangladesh)IsiBhosiniya (isiSirilikhi) saseBosniaIsiBhosniya (Latini)IsiFarsiIsiFilipinoIsiGalishiyaIsiGujaratiIsiHinduIsi-IndoneshiyaIsiJojiyaIsiKannadaIsiKazakhIsiKhatalaniIsiKhmerIsiKonkani IsiKyrgyzIsiMalayalamIsiMalayi (saseBrunei Darussalam)IsiMalayi (saseMalaysia)IsiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiMasedoniya (saseFYROM)IsiNgesiIsiNorwejiyeni (isiNynorsk) saseNorwayIsi-OriyaIsiPediIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiRashiyaIsiSebhiya (isiSirilikhi)IsiSinhalaIsiTatarIsiTeluguIsiThamiliIsi-UrduIsi-Uzbek (iLatini)IsiVietnamIsiWelshiIsiXhosaIsiYorubaIsiZuluKiswahiliLëtzebuergeschNepaliSetswana (Aforika Borwa)Turkmen (Latin) - TurkmenistanumAyirishi
iPhekhi yeIntafeyisi yoLwimi ye-Windows (LIP) inikeza ngohlelo oluguqulelweyo ngokungaphelelanga lweendawo ezisetyenziswa ngokubanzi kakhulu zeendawo ze-Windows. Emva kokufakela i-LIP, iteksti kwiiwizadi, kwiibhokisi zencoko, iimenyu, nezihloko zoNcedo neNkxaso iya kuboniswa kulwimi lwe-LIP. Iteksti engaguqulelwanga iya kuba kulwimi lwesiseko lwe-Windows 7. Umzekelo, ukuba uthenge uhlelo lwe-Spanish lwe-Windows 7, waza wafakela i-LIP yesi-Catalan, enye iteksti iya kuhlala ikwi-Spanish. Ungafakela i-ILP engaphezulu kwenye kulwimi lwesiseko olunye. Ii-Windows LIP zingafakelwa kuzo zonke iintlelo ze-Windows 7.
• Ufakelo lwesiseko olufunekayo lolwimi lwe-Windows 7: isiNgesi
• I-4.63 Mb yesithuba esingenanto sokukhuphela
• I-15 Mb yesithuba esingenanto sokuseta
ISILUMKISO: Ukuba unjiko-nkcukacha olwenziwe lwasebenza lwe-BitLocker, nceda uluxhome phambi kokufakela i-LIP. Vula i-Control Panel, ukhethe i-System and Security, emva koko i-BitLocker Drive Encryption. Cofa ku i-Suspend Protection.
Ngenxa yokuba kukho izikhuphelo ezahlukeneyo zeentlelo ze-32-bit neze-64-bit ze-Windows 7 LIP, phambi kokuqalisa ukhuphelo, kudingeka ukuba umisele loluphi na uhlelo lwe-Windows 7 olufakeleyo: Nantsi indlela omisela ngayo ukuba loluphi na uhlelo lwe-Windows 7 olufakeleyo:
Cofa kwi i-Start qhosha uze ucofe ekunene kwiKhompyutha futhi ukhethe i-Properties. Oku kuya kuzisa ingcaciso esisiseko emalunga nekhompyutha yakho.
Khangela kwicandelo leSistim yohlobo lweSistim. Oku kuya kwalatha ukuba i-Windows 7 iNdlela yokuSebenza yakho iyi-32-bit iNdlela yokuSebenza okanye iyi-64-bit iNdlela yokuSebenza.
Ukufakela inguqulelo ye-32-bit, ungenza nokuba:
Cofa iqhosha u-Dawnlowda, uze ucofe u-Open ukufakela i-LIP
Cofa iqhosha u-Dawnlowda
Cofa ku-Save ukukopishela ifayili kwikhompyutha yakho,
Hamba ukuya kwifayili ekopishiweyo yaye ucofe kabini kuyo ukufakela i-LIP
iNkqubo yoLwimi lwaLapha ye-Microsoft